OIF : Matoky ny hisian’ny fifidianana madio eto Madagasikara -
AccueilSongandinaOIF : Matoky ny hisian’ny fifidianana madio eto Madagasikara
OIF : Matoky ny hisian’ny fifidianana madio eto Madagasikara
Efa miroso tanteraka amin’ny fanomanana ny fifidianana izao isika eto Madagasikara, ary nanome toky ny rehetra ny Filoha tamin’ny filazany fa hotanterahina amin’ ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena. Taorian’ izay dia nangina avokoa ireo mpanohitra izay nieritreritra fa tsy madio fo ny mpitondra ankehitriny, ary taorian’izay aza dia tsy nahitan-teny firy intsony izy ireo. Ankehitriny ihany koa dia efa mazava ny fahavononan’ny fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny famolavolana ny lalàna rehetra mikasika ny fifidianana, izay efa haroso atsy ho atsy eny amin’ ny antenimieram-pirenena. Manoloana izay indrindra dia feno fahatokisana ny rehetra, tsy eto ihany fa hatramin’ireo sampandraharaha iraisam-pirenena maro sy ny fahavononan’ireo firenena hafa ihany koa hanampy amin’ny alalan’ny “basket fund”. Miresaka izay fahavononana sy ny fitokisan’ny any ivelany ny fitondram-panjakana izay, dia tsapa ny fahavononan’ny rehetra. Tahaka izany izao ny fahatongavan’ny iraky ny sampandraharaha iraisam-pirenena ny frankofonia, izay notarihin’ny jeneraly Salou Djibo, avy ao Nigeria omaly, izay nihaona tamin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nambaran’ity manamboninahitra ity fa « izahay dia iraka manokan’ny sekretera jeneralin’ny OIF, Michaëlle Jean, anatin’ny dianay aty ny fampahafantarana sy ny fihainoana ny rehetra amin’ ny dingana izay efa vita amin’ny fanomanana ny fifidianana. Ka raha ny fahitanay ny fanomanana izany fifidianana izany, dia hisy ny fifidianana malalaka anatin’ny fitoniana » hoy hatrany ity iraka manokan’ ny OIF ity.
Raha toa ka resa-be ny mahakasika ny fifidianana teo aloha teo, noho ny lakolosy izay nampanenoin’ ny mpanohitra, dia efa mazava kosa izany ankehitriny hoy ny CENI omaly raha nitafa tamin’ ireo vehivavy mpanao politika. Nandritra izany ihany koa no nanamafisan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, na ny CENI fa tsy misy olana intsony izao ny mikasika ny resaka datim-pifidianana. Tampona sy tankina kosa anefa ny vavan’ireo mpitaty ra -kena rehefa nahitsy ny fanazavana izay nentin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, fa hotanterahina amin’ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an’ ny CENI kosa dia efa mazava ny voalazan’ny lalàm-panorenana, ary ny fanarahana izany amin’ ny antsakany sy andavany no ataon’ izy ireo. Voalaza mantsy anatin’ny lalàm-panorenana fa atao ao anatin’ ny 60 andro na mahery ny fifidianana filoham-pirenena, ary 30 andro kosa izany alohan’ny hiafaran’ny fe potoam-piasan’ny filoha amperin’asa. Midika izany fa ny fifidianana izany dia eo anelanelan’ny 25 novambra hatramin’ ny 25 desambra amin’ ity taona ity. Noho izany dia tokony holaniana eo anivon’ny filankevitry ny governemanta farafahatarany ny faha-25 ny volana aogositra izao ny fiantsoana ny mpifidy.
Andry Colbert, Andry Banga , Mahandry Jean Christian, Mika Be loha, Boli, Lamà, Mahatondra Faneva, Veniste, Sola, Andriambololona Princy, Mainty Bartelemi na Tida kely dia isan’ireo karohina amin’ny fakana an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana mahery vaika. ...Tohiny